किन लगाइन्छ निधारमा टिका ? ~ Khabardari.com
किन लगाइन्छ निधारमा टिका ?
1:44 AM admin No comments
हिन्दु धर्म आनुसार किन लगाइन्छ टीका ?
हिजोआज प्रायः निधारमा टीका लगाएका मानिस त्यति देखिंदैनन् । निधारमा टीका लगाएका मानिसहरू हेर्न चाडपर्व कुर्नुपर्छ ।
गोपीचन्दन, रक्तचन्दन, सिन्दूर, केशर आदिलाई टीकाका रूपमा प्रयोग गरिन्छ । हिन्दु धर्ममा टीका धारण नगरी गरिएका दान, तप, होम, पितृकार्यलाई निष्फल मानिन्छ । शरीरमा रहेका ७२ करोड ७२ लाख ७२ हजार २ सय १० नाडीमध्ये इडा, पिङ्गला र सुषुम्ना मुख्य मानिन्छन् । सुषुम्नालाई ज्ञानको प्रवाहक
मानिन्छ । यो मस्तिष्कको मध्यभागबाट निधारतर्फ निस्केको हुन्छ । यसैमा कालो टीका तिलक वा चन्दन लगाइन्छ । चन्दनले मानिसका विकारयुक्त कीटाणुको नाश गर्ने, विचार शुद्ध राख्ने, वीर्य संरक्षण गर्ने भएकाले चन्दन लगाइन्छ । मस्तिष्क तातेपछि मनमा नकारात्मक तरंग फैलन्छन् । यस्लाई सन्तुलित बनाउन टीका लगाउन थालिएको हो ।
Posted in: Lifestyle,Tips